Akwụkwọ ikike Craft Growers na Illinois - Otu esi etinye akwụkwọ maka etolite Cannabis
Akwụkwọ ikike nka
M kọwara Craft Growers na Illinois kọwara
Anyị nwere Akwụkwọ ikike nka ngwa ahịa ebe a: Gee ya ntị na PodCast ma ọ bụ Lelee YouTube na Craft Grow Ngwa. Maka iwu a kapịrị ọnụ anyị ga-atụle- njikọ njikọ dị n'okpuru: Ngwa Craft Gowers '& Nnyocha ebe a.
Kpọọ banyere ikike inwetara mkpokọ nka na Illinois
Na-achọ Ozi Dispensary - Pịa Ebe a.
“Ọrụ dị aghụghọ” pụtara ụlọ ọrụ nke nzukọ ma ọ bụ azụmaahịa nke Ngalaba Ọrụ nyere ikike ịzụlite, nkụ, ọgwụgwọ na ngwugwu ma rụọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa iji mee ka cannabis dị maka ọrịre na nzukọ na-ekesa ma ọ bụ iji na nzukọ nhazi. Onye na-arụ ọrụ ugbo nwere ike ịnwe oghere ruru puku kubit ise nke okpete n'ụlọ ebe ahịhịa na-eto. Ngalaba Ọrụ Ugbo nwere ike inye ohere ka abawanye ma ọ bụ ibelata uduala ubara ahịhịa na mgbakwunye 5,000 square ụkwụ site na iwu dabere na mkpa ahịa, ikike ọrụ nka, na akụkọ ikikere nke irube isi ma ọ bụ nrube isi, yana oke kachasị nke 3,000 square ụkwụ maka na-akụ mkpụrụ osisi na ifuru, nke a ga-akọrịri n'ọkwa eto eto niile na mpaghara etinyere ma chekwaa ya.
Ọrụ nka CRTA
Ajụjụ na Azịza Illinois Craft Growers
Ọchịchị nke Illinois na-ajụ ajụjụ site na Ndị chọrọ akwụkwọ ikike ikike ịgba akwụkwọ.
A na-agba ndị na-achọ akwụkwọ ume ka ha nyefee ajụjụ ndị edere na Ngalaba banyere ngwa, ihe ntinye, ma ọ bụ usoro ntinye. Ngalaba ga-edepụta azịza ya na ụbọchị abụọ dị ka edepụtara n'okpuru. Ngalaba ahụ nwere ike ịchịkọta ajụjụ ndị metụtara ya, ọ gaghị ebipụta azịza nye ajụjụ ugboro ugboro, ajụjụ a na-ejikọtaghị ya na ngwa ahụ, ma ọ bụ ajụjụ akọwapụtara akọwapụtara nke mbụ.
Ngalaba Ọrụ Ugbo nke Illinois ga-edenye ajụjụ ọ na-aza na azịza nke Ngalaba n’ụbọchị abụọ. Nzaghachi ndị mbụ, maka ajụjụ ndị Ngalaba natara site n'elekere 5 nke mgbede na Jenụwarị 00, 14, ga-eziga elekere 2020 nke mgbede na Jenụwarị 5, 00. A zara ajụjụ nke abụọ, maka ajụjụ ndị natara na elekere 21:2020. n’ehihie na Jenụwarị 5, 00, ka a ga-ezipụ n’elekere 28 nke ehihie na February 2020, 5. Ngalaba ahụ ga-emegharị onye na-ajụ ajụjụ ajụjụ ahụ na azịza ya. Ngalaba ahụ agaghị azaghachi ajụjụ ndị edeghị ede ma ọ bụ ajụjụ ndị azara na Jenụwarị 28, 2020. Enwere ike itinye ajụjụ ndị a na: AGR.AdultUse@illlorida.gov
Akwụkwọ ikikere Craft Growers
Ndepụta ihe ngosi
A: Zuru ike nke ihe ndia chọrọ
Izu ike nke onye achọrọ maka ihe ndozi ga-emerịrị: (1) igosipụta na ụlọ ọrụ ahụ achọrọ dabara maka ịkụ mkpụrụ cannabis dị mma ma dị nchebe; (2) gosiputa ikike irujupụta ihe ndị ahịa chọrọ site na iji ihe eji arụ ọrụ na-etolite arụmọrụ n'ụzọ dị mma ma nwekwa obere mmetụta na gburugburu ebe yana obodo ndị gbara ya gburugburu; na (3) iweta Atụmatụ Ọrụ Omume na Nchịkwa. Isi okwu: 75 Peeji nke: 50
B: Ndabere nke Atụmatụ Ọzụzụ Ndị Ọrụ
Ndokwa nke onye na-ahụ maka ọzụzụ ndị ọrụ ga-enwerịrị: (1) ịkọwapụta atụmatụ mkpara nke ga-ewepụta ma hụkwa ezigbo ndị ọrụ na ahụmịhe maka oge azụmaahịa dị mma, mmepụta nchekwa, idebe ihe ọcha, nchekwa, na mgbochi ohi; na (2) inye akwụkwọ ọrụ nke ga - enyere ndị ọrụ ntuziaka maka ọrụ na njikwa nke akụrụngwa. Isi okwu: 50 Page Limit: 15, anaghị etinye akwụkwọ ntuziaka ahụ achọrọ
C: Atụmatụ nchekwa na ndekọ
Onye anamachọ aghaghi: (1) igosiputa ikike ya igbochi izu ohi ma ọ bụ mgbanwe nke mkpụrụ osisi na otu atụmatụ a ga - esi enyere ISP, Ngalaba, na ndị mmanye iwu ime obodo aka n’imezu oke mmanye iwu, gụnyere ihe akaebe nke irube isi n’ihe niile dị na ngalaba 1300.355, 1300.380 , na 1300.385 nke iwu mberede; (2) gosipụta na atụmatụ ya maka idekọ ndekọ, nchedo na nleba anya, njikwa mma na nchedo yana usoro na usoro ndị ọzọ ga-akụda ọrụ iwu na-akwadoghị, gụnyere nkọwa nke atụmatụ nke onye na-arịọ arịrịọ iji hazie na iwepu nke cannabis na-ejighi ma ọ bụ njupụta na ISP na Ngalaba; (3) kọwaa ebe a kpọchiri akpọchi, kpọchiri aha maka ịchekwa na ịchekwa cannabis yana usoro nchekwa nke Onye anamachọgide ya, tinyere usoro maka mgbe emechiri ọnọdụ maka azụmahịa yana ihe ndị ewere iji hụ na anaghị ahụ ndị mmadụ n'anya. (4) Onye anamachọ gha aghaghi enye atumatu ya itinye akwukwo ikike ma obu ime ka ya na onye n’ebu erimeri nwere ikikere ya na usoro a ga-eji nyefee cannabis na ngwa ahia ndi a na enye ha na ulo ahia cannabis. Enwere otutu mgbakwunye ọhụrụ na atụmatụ nchekwa cannabis ụfọdụ ihe dị elu bụ ma ụbọchị 90 a na-edekọ onsite ma tinyekwa ụbọchị 90 igwe ojii ga-enwere steeti ahụ. Na nka ibu ngwa Illinois achoghi onye nche ka onodu ya no na oge oru. Isi okwu nke ATotal: 145 Peeji nke: 65
D: Atụmatụ ịkụ mkpụrụ
Onye anamachọ aghaghi: (1) ịkọwapụta atụmatụ ya ịnye ndị cannabis ngwa ahịa, anaghị akwụsị akwụsị. (2) gosipụta ihe ọmụma banyere ụzọ a ga-esi kọọ ahịhịa dị iche iche, gụnyere ụdị dị iche iche a ga-esi kụọ, ya na ahụmịhe nke Onye anamachọcha ahụ, ma ọ bụrụ na ọdabara, na-eto eto ma ọ bụ ihe ubi nke yiri ugbo. (3) gosipụta usoro a ga-ewere iji hụ na ịdị mma nke cannabis, gụnyere ịdị ọcha na ntinye, nke cannabis ka a ga-enyefe ya na ndị na-anata ozi. Isi okwu: 75 Peeji nke: 50
E: Nchebe ngwaahịa na Atụmatụ Labeling
Onye na-achọ ọrụ na-etopụta ọrụ ga-: (1) ịkọwapụta atụmatụ ya maka ịkwakọ ngwaahịa nchekwa na nke ọma na ịkọwa cannabis; (2) ịkọwapụta atụmatụ ya maka inyocha cannabis na ịgba mbọ hụ na cannabis niile enweghị nsị; (3) ịkọwapụta atụmatụ ya maka igosipụta ngwaahịa azụta ma ọ bụrụ na ntụpọ ngwaahịa ma ọ bụ nsonaazụ ahụike na-emetụta ndị na-azụ ahịa, gụnyere ụzọ isi mata ngwaahịa, ịkọwapụta azịza na / ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa, na mkpofu ngwaahịa a lọtara. Isi okwu: 95 Page Limit: 55
F: Atụmatụ azụmahịa na ọrụ a ga-enye
Onye na-achọ akwụkwọ ikike ịgha ọrụ ịgha ọrụ ga-emerịrị: (1) iwepụta atụmatụ azụmahịa nke na-akọwa etu onye ọrụ nka na-esi arụ ọrụ ogologo oge, gụnyere nkọwa zuru ezu banyere ego na isi mmalite nke ịha nhatanha na nkwa ụgwọ na o kwere omume ego; (2) gosipụta ma / ma ọ bụ kọwaa ahụmịhe ahụ onye anamachọ ya ma ọ bụ ndị ọrụ ya, ndị otu ya, ma ọ bụ ndị na-etinye aka na njikwa azụmaahịa, ụlọ ọrụ a, ma ọ bụ ọrụ ugbo na ọrụ ubi, na oke itinye aka ha na ma ọ bụ ikike iji metụta ụbọchị. -ụbọchị ọrụ nke ihe owuwu; (3) weta usoro iheomume mmalite nke na-enye oge atụmatụ site na nnabata ikike ruo na ọrụ zuru oke, yana ntọala nke atụmatụ ahụ. Nke a kwesịrị ịgụnye nkwupụta nke Onye Obere nwere ike igosipụta ahụmịhe na omume ma ọ bụ omume azụmahịa nke na-akwalite ike akụ na ụba na mpaghara Ahịa Mmetụta Ọrịa. Isi okwu: 110 Page Limit: 60
G: Onye chọrọ inweta ego mmekọrịta ọhaneze
Ihe ndi a bu ihe ndi ochicho ochichi ndi ochichi nke anyi dere banyere otutu - Pịa ebe a maka ozi ndi ozo banyere ndi otu ndi otu ndi otu ndi ahia ahia achoputara.
200 isi - enweghị mmachi peeji.
H: Omume Ọrụ na Ọrụ Ndị Ọrụ
Onye anamachọ aghaghi: iweputa atumatu inye ndi oru ya nchekwa, ahuike na onodu aku na uba, ndi ozo gunyere, ma atughi ya, ebe odi iche-iche nke onodu oru ya na onodu gburugburu ebe obibi, usoro omume, ihe omume ahu ike, uru ulo akwukwo, uru ezumike nka. ụkpụrụ ịnabata ụgwọ ọrụ na ịbanye na ndị ọrụ nkwekọrịta udo. Isi okwu: 20 Peeji nke: 10
M: Atụmatụ gburugburu obibi
Onye anamachọ aghaghi: (1) weputa ma obu gosiputa atumatu iji belata akara ukwu nke carbon, ihe omuma gburugburu ebe obibi, na ihe ndi ozo eji enyere ha aka. (2) ịkọwapụta atụmatụ ọ bụla maka iji ike ọzọ, ọgwụgwọ mmiri na-ekpofu ma gbafuo, na ọgwụgwọ nke ikuku gbanwere. Isi okwu: 20 Peeji nke: 10
J: A na-achịkwa ma ọ bụ nwe Illinois nke Illinois
Nrụpụta Aka Ọrụ Ọchọpụta ga-ekwuputa ma onye anamachọ ya bụ Illinois olugbe Ejikwazi ma ọ bụ ejiri ya. Ọ bụrụ na anamachọ akwụkwọ anamachọi ka a na-achịkwa ya ma ọ bụ nwe ya, ọ ga-enye ozi ọ bụla ọzọ na Ihe ngosi a. Ọ bụrụ na Onye anamachọihe na-etinyere ka onye na-achịkwa Illinois olugbe ma ọ bụ nwee ya, Onye anamachọ ga-eme ya: weta ihe ndekọ ụtụ isi nke na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ ga-ejikwa 51% nwee ma ọ bụ nwee onye ọ bụla bi na Illinois kemgbe afọ 5 gara aga. Isi okwu: 90 Peeji nke erughi: ọ nweghị
K: Veteran achịkwa ma ọ bụ nwere ya
Onye anamachọ aghaghi ikwuputa ma onye anamachọ ka a na-achịkwa vetiran soja ma ọ bụ nwe ya. Ọ bụrụ n’obodo a anaghị ejide ma ọ bụ nwe ya, Onye anamachọ anaghị enye ozi ndị ọzọ na Ihe ngosi a. Ọ bụrụ na Onye anamachọihe ka Veteran nwe ma ọ bụ jikwa ya, Onye anamachọ ga-enye: weta ihe akaebe na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ 51% na-achịkwa ma ọ bụ nwee ikike, dị ka akọwara na Ngalaba 45-57 nke Usoro Prozụpụta Illinois (30 ILCS 500). Isi Okwu: 20 Peeji nke: ọ dịghị
L: Atụmatụ di iche-iche
Onye anamachọ aghaghi: nye ya akuko nke mejuputara ebumnuche di iche na ikike, njikwa, oru, na nkwekọrịta iji hu na ndi otu na ndi otu di iche-iche nyere ohere nke ohere. Isi okwu: 100 peeji ịgba: Onwa karịrị okwu 2500
M: Akụkụ Daashi (Nhọrọ)
N'ihe banyere njiri mara akara ọrụ Craft Grower, Departmentlọ Ọrụ Ugbo nke Illinois nwere ike ị nweta ihe nrịbama abụọ maka atụmatụ dị mma mana achọrọghị atụmatụ ndị a: (2) atụmatụ uru ndị obodo, (1) , (2) mkpesa ime obodo / agbataobi. Ọ bụrụ na-enye ihe ngosi a, Onye anamachọ ga-ekwuputa ụdị (ma ọ bụ otu) nke ndị anamakwadoro maka azịza ha. A ga-edenye nke ọ bụla otu na nzaghachi ya kwekọrọ na ya. Ngụkọta ọnụ: 3 na udi otu Ikike: 2 ke otu
N: Ngwongwo Ngwongwo
Onye anamachọ ya ga-edobere akwụkwọ dị iche dabere na ọnọdụ onye anamachọ ka onye nwe ụlọ ya. Ọ bụrụ na ogbe ahụ, ọ bụrụ na onye chọrọ ya agbaa ụlọ ahụ, ọ ga-etinye akwụkwọ nke ụlọ ahụ, njirimara nke onye nwe ala, njirimara nke ụlọ ọ bụla na / ma ọ bụ nye ndị nwe ụlọ, nkwupụta edere n'aka onye nwe ya na / ma ọ bụ onye nwe ala na-ekwupụta nkwenye maka ụlọ ọrụ ga-arụ ọrụ na ngalaba ahụ site n'aka onye ahụ na-arịọ arịrịọ ọ dịkarịa ala site na Disemba 31, 2021, ma ọ bụrụ na ọdabara, nkwenye nke onye nwe ụlọ mara ọkwa ya na ụgwọ niile na / ma ọ bụ ndị nwere ego zuru oke na a ga-eji ihe ahụ. ụlọ ọrụ aka na-etopụta opekata mpe rue Disemba 31, 2021, ma kwenye site na nnyefe ego na / ma ọ bụ ndị nwere ego zuru oke. Ọ bụrụ na onye nwe ya, ma ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ahụ agbazinyela ya ugbu a, ọ ga-etinye akwụkwọ ya: nkwupụta edere ede sitere n'aka onye nwe ya na / ma ọ bụ onye nwe ala na-ekwupụta nkwenye maka onye na-etinye akwụkwọ ịgbazinye ma ọ bụ zụta ala maka ebumnuche nke iji rụọ ụlọ ọrụ aka na opekata mpe site na Disemba 31, 2021, ma ọ bụrụ na ọdabara, nkwenye nke onye nwe ụlọ mara ọkwa na nnyefe ụlọ na / ma ọ bụ ndị nwere ego zuru oke na a ga-eji ụlọ ahụ wee rụọ ụlọ ọrụ aka dịkarịa ala site na Disemba 31, 2021, na nkwenye site na ya. nnyefe ego na / ma ọ bụ ndị nwere ego zuru oke. Ọ bụrụ na ejiri ngwa ahụ nweta ya, ọ bụrụ na onye chọrọ ụlọ ahụ nwe ya, onye chọrọ ime ya ga-enyefe ya: nkwenye nke nwe ala, njigharị nke ụlọ na ụgwọ niile na ma ọ bụ nwee ikike zuru oke, ma ọ bụrụ na ọdabara, nkwenye nke ngosi na ndị nwe ego niile na / ma ọ bụ ndị nwere ego zuru oke na akụrụngwa ahụ bụ ka etinyere dị ka ebe akụrụngwa na-eto eto ma ọ dịkarịa ala rue Disemba 31, 2021; ma ọ bụ nyefee ya na ụgwọ ọ bụla na / ma ọ bụ ndị nwere ego zuru oke. Ibelata peeji: ọnweghị
O: Mara ọkwa na Zards Kwesịrị Ekwesị
Ihe ngosi a nwere akuku abuo: otu onye anamachọcha gha mezue ya, na otu ndi ochichi mpaghara zachara ime ya. A ga-emerịrị akụkụ abụọ ahụ.
P: Nkọwa nhazi na ego gbasara ego
Onye anamachọ ga-ekpughere ozi niile gbasara ego metụtara ego na-adị aghụghọ. Na nzaghachi na Ihe ngosi a, a na-agba ndị na-achọ akwụkwọ ka ha nyochaa nkọwa nke "mmasị ego" na iwu, yana Nkebi 1300.305 na 1300.300 (c) (22) - (27). Onye na-eme ihe eji achọ ihe, ga-enyerịrị:
1. Usoro nke Onye na-azụlite ihe, gụnyere mmasị ọnụọgụ nke onye ọ bụla ma ọ bụ azụmahịa. Nke a kwesịrị ịchọpụta ndị isi niile na ụlọ ọrụ azụmaahịa nke sitere n'ụzọ pụrụ iche, jikwaa, nwee ma ọ bụ ijikwa mmasị na akụ nke ngwa ọrụ Craft Grower. a. Onye tinyere akwụkwọ ga-ekwupụta ụdị ụlọ ọrụ ọ bụ: ọ bụ naanị ya nwe ya, onye ya na ya na-emekọrịta ihe ma ọ bụ nke ọzọ.
i. Sole ndị nwe ụlọ ga-enyerịrị aha, ebe obibi, na ụbọchị ọmụmụ nke onye nwe ha. ii. Mmekorita niile gha aghaghi inye aha na adresị nke ndị mmekọ niile, ma ndị na-ekwu okwu na ndị nwere oke, yana akwụkwọ mmekọrịta ọ bụla. iii. Onweghi mmekorita nke di na ya, ndi nwere oke nkpa, ndi ulo oru, na ndi nwere nsogbu a aghaghi inye akwukwo nke adi na akwukwo ode akwukwo nke ndi isi ocha, nke emere na ode akwukwo nke Steeti nke Illinois nyere. iv. Companieslọ ọrụ ndị nwere ọrụ amachiri ga-eweta nnomi nke Organizationtù Ndị Ọgbakọ na ndepụta nke ndị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ dịịrị yana ozi ịkpọtụrụ ha. v. polọ ọrụ agha ga-enyerịrị Usoro Nsonye, ​​yana nnomi edere aha edepụtara site n'aka onye odeakwụkwọ nke Ochichi ma ọ bụrụ na ọdabara. Polọ ọrụ ga-ewetakwa aha na adresị ndị na - echekwa ụlọ ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ ahụ.
1. foreignlọ ọrụ ndị mba ọzọ niile ga-ewetarịrị akwụkwọ maka ụdị nke ha dị n’elu, gbakwunye otu akwụkwọ Asambodo Ntinye Aka Gị site na ikike isonye n ’ụlọ ọrụ, yana otu Akwụkwọ Asambodo nke Ọdee akwụkwọ Ọchịchị Illinois nyere.
2. Chaịlị nhazi nke ugbu a, nke na-akọwa nkọwa na aha na malitegharia nke ndị nwere ọnọdụ. Gụnye ụzụ ndị ọzọ, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ ahụmịhe dị mkpa na ọsụ ụzọ na-adịghị esonye na mmalite ndị ọrụ.
3. Mpempe akwụkwọ nkwekọrịta nkwụghachi ụgwọ, nkwekọrịta nchịkwa, nkwekọrịta ọkọnọ, ma ọ bụ akwụkwọ ego ndị ọzọ n'etiti ma ọ bụ n'etiti Onye anamachọ ya na ndị ọ bụla nwere mmasị ego na / ma ọ bụ njikwa na ikike, gụnyere ndị na-azụ ahịa, ndị nwe ya, na ndị isi ya, ma ọ bụ akụkọ ma ọ bụrụ na nkwekọrịta bụ ọnụ.
4. Edemede nke guzosiri ike na Onye anamachọ ihe ruru $ 20,000 n'ime akụ mmiri mmiri.
5. Ọdịdị na ụdị nke agbụ ọ bụla dị ịrịba ama, mgbazinye ego, usoro nke akwụmụgwọ, wdg, nyere ma ọ bụ gbuo, ma ọ bụ ka enyere ma ọ bụ gbuo, n'ihe metụtara mmeghe ma ọ bụ ịrụ ọrụ nke ndị aghụghọ chọrọ.
6. Igosipụta ụzọ niile esi enweta ego iji nweta ma ọ bụ zụlite azụmaahịa aghụghọ na akwụkwọ maka ụdị ego a. Onye anamachọi gha aghaghi imezu ihe omuma a n’okpuru onye obula ma obu ihe ejiri mara ya n’elu ozi di n’elu.
Ajụjụ: Isi nke Onye isi ma ọ bụ Nkwupụta Nkọwa nke Otu
A ga-emerịrịrị onye isi ndị ọrụ Craft Grower maka onye isi ọ bụla na / ma ọ bụ onye otu bọọdụ. Ekwesịrị ijupụta ụdị a kpamkpam agbanyeghị na enwere ike ịnweta ozi mbiputara.
Onye anamachọ ọrụ na-etolite ga-edebanye ma mepụta nkwupụta enyere ya aka na ọ gaghị eme ụfọdụ ihe, yana ozi dị na ngwa ihe eji achọ ọrụ bụ eziokwu ma zie ezi.
S: Mpempe akwụkwọ nkwenye ederede aka
Onye anamachọihu gha mezue nkwenye ndi eji akara mkpisi aka a wee bia nye ya onye na-ere ihe nlere. Agaghị etinye ụdị a na Ngwa. Onye anamachọ ekwesighi igbanwe aha ulo oru a na acho, ndi acho acho gi ma obu ihe njiri mara ihe ma o bu ihe m choro.
Etu ị ga - esi bụrụ onye na - eto Craft na Illinois.
Anyị na-aga na-ekpuchi ngwa ndị ga-eme ka ndị ọrụ nnabata ọhụrụ 150 banye n'ahịa ịkụ cannabis nke Illinois na-abịanụ.
Iji nyere ndị mmadụ aka ịchọpụta ozi a gbasara otu esi enweta ikikere ịkwa akwa - mebie mmasị na ịdenye aha. Ugbu a, ka anyị kwuo oge ahịrị na ihe na-abanye na ngwa iji nweta akwụkwọ ikike. Nke a bụ usoro dị oke ogologo - mana ọ bụrụ na ị nọrọ rue ngwụsị, mgbe ahụ ị ga-amata azịza ajụjụ a “enwere m ike ịnwe ọrụ aka, ihe na -eme ihe ma na-enye ya ụlọ n'otu ụlọ ahụ ma ọ bụrụ na ha niile bụ nke aka ha na ndi enyere ikike ?? Hmm… nke ọma, ka anyị rute ya Ihe niile gbasara otu esi enweta ikikere ọrụ aka gị.
Ohere ole Ndị Ọrụ Ihe Ọrụ Nkwa na Illinois?
Ngalaba Ọrụ Ugbo ga - nke a bụ iwu - ewepụta ikike ikikere ọrụ 40 ka ọ dị na July 1, 2020, ha enweghị ike ree ikike ahụ rue mgbe ụbọchị ụka 21, 2021. Ọzọkwa site na december 21, 2021, ngalaba nke ọrụ ubi ga - ewepụta ọzọ Akwụkwọ ikike ọka 60 dị na Illinois. Ka ọnwa Jenụwarị 1, 2022 gachara, ngalaba ọrụ ọrụ ugbo nwere ike iweli ọnụọgụ nke ndị na-akọ ihe wee gbanwee akwụkwọ ikike maka ya - mana enweghị ike ịgụta ndị ọrụ ugbo 150 na steeti ahụ.
Akwụkwọ ikike nka (Craft Growers) - Akwụkwọ ikike ọhụrụ maka ndị na-akụ mkpụrụ cannabis na Illinois.
Ya mere, ka anyị kwuo maka ihe ga-abanye n'ime akwụkwọ ikike ahụ maka ndị ọrụ mbụ na-azụ 100 otu ndị ọrụ na Illinois.
Iwu nke 30-10 nke iwu kpuchie ngwa. Gaa na websaịtị anyị na ọka iwu ụlọ ọrụ cannabis maka njikọ ibudata ngalaba a ka ị nwee ike nwe otu ịchọrọ iji nyere ụlọ ọrụ cannabis aka imepe na Illinois.
Ngwa a gụnyere:
Akwụkwọ anaghị akwụghachi ụgwọ $ 5,000 - ego ikike ikikere bụ $ 30,000 ma ọ bụrụ na ngwa gị bụ otu ole na ole nwere ihu ọma ahọrọ.
Aha iwu gbasara onye ọka ihe
Adreesị ahụ a tụrụ aro nke ọrụ ịchọrọ ọka
Aha, adresị, nọmba nchekwa ọha, ụbọchị ọmụmụ nke onye isi ọrụ ọ bụla na onye otu onye ọrụ nka - ha niile ga-abụrịrị afọ 21.
Nkọwa nke usoro nchịkwa ma ọ bụ nke ikpe (ụlọ ikpe) ebe onye ọ bụla n'ime ndị mmadụ chọrọ ihe 4 kwupụtara ikpe, ma ọ bụ nwee ikike iwepụrụ ma ọ bụ kwụsịtụrụ ikike.
Mpempe akwụkwọ a tụrụ aro gụnyere usoro maka ileghara ọrụ aghụghọ, gụnyere mmepe na ntinye nke usoro nleba anya osisi, ndebe ndekọ zuru ezu, atụmatụ ndị ọrụ, yana atụmatụ nchekwa nke Ngalaba Ndị uweojii steeti kwadoro nke na-agbaso usoro iwu site na ngalaba Ag-abịanụ. maka Ọktoba 2019 - a ga-eme ihe ọkụkụ ga-eme kwa izu site na ọrụ izu.
- lee, ọ bụ ya mere m ji na-agwa ndị mmadụ tupu ego a ga-adị elu, ọtụtụ azụmahịa ka mepere emepe, ha anaghị akwadebe akwụkwọ niile a na - achị achị tupu e nweta ikike iji mepee maka azụmahịa - yabụ na ọ bụ ya mere ndị ndụmọdụ ga - eji na - atụ ụgwọ nkwụghachi ọ bụrụ na ọbụghị narị otu narị puku dọla iji nyere aka na azụmaahịa gị ịnweta ikikere ya itolite na Illinois, yabụ jụọ ndị na-ere ahịa ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere ọrụ dị ha mkpa maka azụmahịa gị - dị ka ọka iwu gị nwere. Ugbu a laghachi n'ihe niile achọrọ.
Nkwado site n’aka ndị uwe ojii Steeti na nyochaala azụmaahịa niile nke ndị isi, ndị otu ndị ọrụ, na ndị nnọchite azụmaahịa azụmahịa cannabis.
Mpempe akwụkwọ orgindace mpaghara dị ugbu a ma ọ bụ ikike na nkwenye na ndị na-azụ ahịa na-agbaso iwu mpaghara
Employmentzọ omume chọrọ amamịghe - akwụkwọ ọrụ aka - nke na-egosi atụmatụ nke ime ihe iji gwa, ikuzi na ikuzi obere pere mpe, ụmụ nwanyị, ndị agha na ndị nwere nkwarụ, na -arụ ọrụ dị mma ma chebe ndị ọrụ.
Gosiputa ahụmịhe na omume ma ọ bụ azụmahịa azụmaahịa nke na-akwalite ike akụ na ụba na mpaghara ebe emetụtaghị ya.
Ahụmịhe na ịkụ ọrụ ag biz ma ọ bụ arụ ọrụ ọdịbendị
Nkọwapụta nke mkpọchiri mkpọchi, mapụtara ya, ma ọ bụ mebie ya, ma ọ bụ nwee ụzọ maka ekesa ma zigharịa ya.
Nnyocha nke ebe a kpọchiri akpọchi, gbachiri ebe ahụ gụnyere spaced maka ịkụ
Atụmatụ nri, nhazi, atụmatụ na ịkwakọ ngwaahịa,
Nkọwa nke ahụmịhe onye na-achọ ọrụ na teknụzụ agach na usoro ụlọ ọrụ.
Ndepụta nke ogo, asambodo, ma ọ bụ ahụmịhe bara uru nke ndị isi azụmaahịa ọ bụla na-aga n'ihu, ndị otu bọọdụ na gents nke azụmahịa metụtara
Amata onye ọ bụla nwere mmasị ma ọ bụ ntuli aka nke 5% ma ọ bụ karịa
Atụmatụ na-akọwa etu onye na-akpụ ọka ga-esi lebara nke ọ bụla anya:
Achọrọ ume - yana adoptions nke iji ike na-adigide
Akụkọ mmiri na njigide mmiri ma ọ bụ nchekwa nchekwa mmiri
Mkpofu ahihia na mkpochapu ahihia
Atumatu nwughari maka ngwongwo ndi ha ji ere ahia, ihe omuma ndi ozo nke eweghari, ma obu mkpocha cannabis
Ọzọkwa - a ga-eme ka ahịhịa ndị a na-emebi emebi na -eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị atụ iji kpochapụ ya na ihe mkpo ndị ọzọ na-emebi emebi.
Gịnị ka onye ọrụ ịkpụ aka ga-emerịrị iji debe akwụkwọ ikike ya?
Gosiputa onwe gi idebe ihe mkpofu obodo - ma gbasoo ihe nile ochichi gburugburu na nke steeti choro tinyere - ịchekwa ihe mkpo ahihia nile ahihia na cannabis.
Nrara nkwa nke teknụzụ maka ike ịrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ nka - ọ pụtara
Crawer grower nkwa iji akụ rụọ ọrụ nke ọma - gụnyere ike na mmiri maka ịkpa cannabis & zute ma ọ bụ karịa chọrọ teknụzụ.
Na-adabere n'ogo oghere oghere ụdị ụdị HVAC eji
Gụnyere sistemụ mmiri akpaaka
Tụọ nha mmiri nke sistemụ.
Ihe omuma ndi ozo choro site na iwu.
Lee - mara mma ihu. Ogologo akụkọ dị mkpụmkpụ - ngwa nka na-eto eto ga-ewe gị ogologo oge, ọ bụkwa ya mere ndị na-ahụ maka ndụmọdụ ga-anọ na-erere gị maka otu ha si eme ihe yana ihe kpatara ọ na-arụ ọrụ, mana tupu ime nke ahụ - biko lee anya ka esi enweta ihe ngwa ndị ahụ. .
Nyocha Ngwa Ndị Ọrụ Ugbo na Illinois
Anyị tụgharịa aka na ngalaba nke 30-15 nke Craft Grower iwu iji nweta etu esi enweta akara ndị ahụ. A kọwapụtaghị isi okwu ndị ahụ nke ọma, mana anyị nwere ike ịme ntụgharị nke mgbakọ na mwepụ iji maale na 78% isi ihe ndị a na-akọwaghị.
Izu ike nke ihe owuwu a chọrọ
Ndokwa nke atụmatụ ọzụzụ ndị ọrụ
Nche na idekọ ndekọ
Atụmatụ ịkụ mkpụrụ
Nchekwa ngwaahịa na akara ngosi
Ọnọdụ onye anamachọihe dị ka onye na-ahụ maka ịha nhatanha - mgbe emechara vidiyo ahụ - aga m etinye njikọ ahụ ebe ahụ. - nke a bụ oge mbu enyere ọnụọgụ nọmba, ihe na-erughị 20% nke isi ihe dị na-aga ụdị a - yabụ opekata mpe 20% nke mkpebi a bụ, leghaara ya anya n'ihe ga-emetụta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ ikike ahụ.
Omume ọrụ na ọrụ - nke agaghị abụ ihe na-erughị 2% ruo isi ihe niile dị - nke ahụ bụ ihe dịka 10x dị njọ karịa ileghara karịa nha anya mmadụ, mana ọ ka nwere ezigbo ọrụ aka ọrụ,
Atụmatụ gburugburu gị gbasara ọrụ ịkụ gị ka HVAC, H20, arụmọrụ ike na atụmatụ teknụzụ.
Ihe nka kariri 51% onye bi na Illinois nwere
Ihe kariri 51% nwere ikike ma obu onye agha na-achịkwa ya
Atụmatụ di iche-iche nke gunyere akuko banyere ihe kariri 2,500 nke na -eweputa ebumnuche gi banyere di iche, nhazi, oru na nkwekọrịta
Ihe ọ bụla ọzọ ngalaba nke ag nwere ike ịtọ iwu maka isi ihe
Ihe ngbata ego abụọ maka atụmatụ nke onye tinye akwụkwọ ka ya na ndị obodo tinye aka, mana a na-enye ya naanị ma ọ bụrụ na ekekọta ngwa maka otu mpaghara.
Ọ bụrụ n’in merie - ihe ọ bụla atụmatụ etinyere n’ime ngwa ọrụ gị na-eto ka ọ bụrụ ọnọdụ nke ikikere - ịhapụ irube isi na usoro nke aka gị ga-ekpughere nkwupụta nka gị n’ihe egwu nke ikikere - yabụ na ị ga - ekwu nke ọma karịa ihe ị na - ekwu na ngwa gị. .
Really chọrọ n'ezie ikike ikike ọrụ na Illinois?
Anye, amaara m - nri? Ngwa a dị nzuzu ogologo & ọ bụrụ na ị merie, mgbe ahụ ọ ghọrọ ọnọdụ nke ikikere gị. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ nke a ma chọọ ịmatakwu ozi, denye aha na ọwa ma nye anyị isi mkpịsị aka ya na ọdịnaya ka ọtụtụ n'ime ya pụta na ndepụta gị.
Enwere ike Jikọtara Ọkpụkpọ na Craft na Illinois?
Dabere na peeji nke 215 nke iwu ahụ - onye ọrụ aka nwere ike kesaa ebe a na - ere ma ọ bụ kesaa ya - ma nwee ikikere ya kerịta ihe niile jikọrọ ọnụ dịka ime ụlọ mkpuchi, ụlọ nri ehihie, ụlọ ịsa ahụ.
Yabụ otu ụbọchị ọrụ aka nwere ike ịbụ azụmahịa azụmaahịa niile site na mkpụrụ ruo na-ere - anyị ga-ahụ.
Daalụ maka isonyere m na ihe omume a - cheta, wii wii naanị naanị ọnwa ole na ole - yabụ bido itinye atụmatụ gị maka ịkọ ihe. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka m, naanị onye ọka iwu google cannabis wee kpọtụrụ m. Udo diri y'all!